Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment गायक उदित नारायण झालालाई पटक-पटक आयो ज्यान मार्ने धम्की - Pnpkhabar.com
गायक उदित नारायण झालालाई पटक-पटक आयो ज्यान मार्ने धम्की
एजेन्सी : बलिउडका चर्चित गायक उदित नारायण झालाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। अपरचित व्यक्तिले ज्यान मार्ने धम्कि दिएपछि दुई हप्ताअघि उनले उजुरी दर्ता गरेका थिए। उनलाई धम्कि दिने व्यक्तिको खोज भईरहेको छ भने उनको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको खबर छ।
पछिल्लो एक महिनादेखि निरन्तर उनलाई एक अपरिचित व्यक्तिले फोन मार्फत धम्की दिइरहेको छ । पुलिसका अनुसार अपरिचित व्यक्तिले अहिलेसम्म ज्यान मार्ने धम्की बाहेक रकम लेनदेनको कुरा भने गरेको छैन । फोन नम्बर नेपाल सीमावर्ती भारतको बिहारको भएको आफ्नो नाम लक्ष्मण बताएको पाइएको छ । पटक-पटक फोन नम्बर परिवर्तन गरेर उक्त व्यक्तिले धम्की दिइरहेको छ । पुलिसले चोरीको मोबाइलबाट धम्की आएको जनाएको छ ।
मुम्बई पुलिस घटनाको अनुसन्धानका लागि बिहार आउने तयारी गरेको छ । नेपाली मुलका उदित मुम्बईको अंधेरी वेष्टमा बसोबास गर्छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीले अहिले उदित नारायणको घर आसपासको क्षेत्रमा समेत सुरक्षा दिइरहेका छन् । सादा पोशाकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । उदितको घरआसपास आउने व्यक्तिमा पनि निगरानी राख्न थालिएको छ ।
लता मंगेशकरको निधनको अफवाह प्रति परिवारको गम्भीर आपत्ति
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन अस्पतालमा भर्ना !
बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी नेपालमा
गणेश चतुर्थीमा पूजा गर्दा सलमान खान बने ट्रोलको सिकार !
बहुप्रतिष्ठित फिल्म ‘साहो’ रिलिज भएको केहि घण्टामै इन्टरनेटमा लिक